गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउन डा. केसीको अभिभावकत्व सधैँ चाहिन्छ – Health Post Nepal
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउन डा. केसीको अभिभावकत्व सधैँ चाहिन्छ
२०७५ माघ १५ गते १०:३१
डा. केसीको जीवन रक्षाको पहल गरिदिन चिकित्सकहरुको राष्ट्रपतिलाई आग्रह
देशभर चिकित्सककाे रिले अनशन
डा. केसीको स्वास्थ्य थप नाजुक, निमोनिया जटिल बन्दै गएपछि नसाबाट एन्टिबायोटिक्स दिन थालियो
राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर भएको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सघाउने संघसंस्था र विभिन्न तहका नागरिकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यस अर्थमा नेपालको चिकित्साक्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी अनशनरत रहेको भवनअगाडि एउटा सूचना लेखिएको छ– यहाँ टिभीको औषधि निःशुल्क पाइन्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवननिकट भविष्यमा ३ करोड नेपाली जनताका लागि एउटा पवित्रस्थलको रूपमा स्थापित हुनेछ । जो–जो यो भवनमा आउनेछन्, उनीले यो भवनप्रति श्रद्धाले शिर निहुराउनेछन् ।
विगतका दिनमा जसरी यहाँको प्रवेश परीक्षाका क्रममा धाँधली हुने गरेका थिए, त्यसबारे डा. गोविन्द केसीले विरोध जनाउँदा उनीप्रति नकारात्मक नजरले हेरियो । त्यसैगरी गरिबका छोरा–छोरीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित डा. केसी अगाडि बढ्न खोज्दा उनलाई पागलको संज्ञा दिइयो ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धाका आधारमा चिकित्सक बन्न पाउनु विश्वको मान्यता हो र त्यो नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दा उनको मागलाई उपेक्षा गरियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनियन्त्रित रूपमा खोलिएका मेडिकल कलेजका कारण नेपालको समग्र चिकित्साक्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने धारणा राख्दासमेत केसीको मागलाई बेवास्ता गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट प्रमाणित भइसकेको उक्त तथ्यलाई समेत नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । सम्पन्न मुलुक अमेरिका तथा छिमेकी देश बंगलादेशको ढाकामा जथाभावी रूपमा मेडिकल कलेज खोलिँदा जुन हविगत भएको छ, त्यसबाट सरकारले अलिकति पनि सिक्न खोजेन ।
लोकतन्त्रको पक्षमा लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिविरुद्ध लड्ने डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन । चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिलाई हटाउनकै लागि भए पनि डा. केसी बाँच्नै पर्छ । कारणवश डा. केसीको जीवन तल–माथि भयो भने फेरि पनि पहिलेको इतिहास दोहोरिन सक्छ । ३ करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न डा. केसी बाँच्नैपर्छ । आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनका लागि लडाइँ बाँकी नै छ, त्यसका लागि डाक्टर केसीको अभिभावकत्व आवश्यक छ ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा सरकारको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई निर्देशन दिने त्यो एउटा चिकित्सक (डा. केसी) को हो भन्ने धारणा सरकारको छ । तर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र समर्थनमा डा. केसीले विजय हासिल गर्दै आएका छन् । विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि सत्यको जहिले पनि विजय नै हुन्छ । त्यसैले सत्याग्रहीको सधैँ विजय हुन्छ ।
१० साउनमा सत्याग्रही डा. केसी र कार्यकारी प्रमुखकै पहलमा सरकारबीच ३ करोड नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर जुन सहमति भयो, त्यसको आज किन उल्लंघन भयो भन्ने कुराको जवाफ सरकारले दिनु आवश्यक छ । के डा. केसीलाई सहिद नै बनाउन खोजिएको हो त ? त्यसको जवाफ सरकारले दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सहिद बनाउने व्यक्ति धरासायी हुन्छन् भन्ने विश्व इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
अनशन बस्नु चिकित्सकको रहर नभई बाध्यता हो । आन्दोलन तथा अनशनका नाममा जनतालाई सेवा नदिनु हाम्रो नैतिकताभित्रको कुरा होइन । जनताप्रतिको जिम्मेवारीको भावनाले पनि हामी अभिप्रेरित छौँ । त्यसकारण सरकारले आजै संसदीय प्रक्रियाबाट डा. केसीका माग पूरा गरेमा मुलुकमा अशान्ति तथा चिकित्सक हड्तालको अवस्था आउने थिएन ।
Tags: १६औँ अनशन, प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेल